Tichitarisa Shure Kubasa Redu Tose muna 2021, Kugadzirira Basa Richauya - The UnCommission
Tichitarisa Shure Kubasa Redu Pamwe Chete muna 2021, Kugadzirira Basa Riri Kuuya
Muzhizha 2021, 100Kin10 yakatanga kutaura nevadyidzani munyika yese nezve pfungwa yedu yekusaita Komisheni, iyo yaizoshandura kugadzirwa kwetsika mumusoro wayo. Isu takatenda kuti, panzvimbo pezvinangwa zvenyika kubva kumusoro zvichidzika, taifanira kutora gwara kubva kune avo vakanyanya kubviswa pamukana weSTEM, kunyanya Vatema, Latinx, uye vechidiki vekuAmerica vekuAmerica. Tiye UnCommission aizoisa zviitiko zveSTEM zvevechidiki uye, zvichibva pane nyaya dzavakagovana, kukudziridza zvinangwa-zvakagadzirira izvo zvinotungamirira chiono chitsva cheramangwana redu.
Sezvatinovhara 2021, taida kufungisisa nezvebasa rekubatana reUnCommission kusvika parizvino uye kugovera zvichauya mugore idzva.
CO-CREATORS OF THE UNCOMMISSION
Taiziva kuti isu taisakwanisa kuita basa iri tega uye zvaive zvakakosha kuti tigadzire chiitiko chikuru, chakasiyana, uye chekutora chikamu.
Kupfuurisa Masangano e130 vakakwira semabhiriji nezvibatiso, mumwe nemumwe wavo achibvuma kutibatanidza nevatauri vengano uye kugadzira nharaunda dzavanogona kugovera zviitiko zvavo zvechokwadi.
25 vatungamiri venharaunda havana kungogovana nyaya dzavo chete asi vakaenda danho rinopfuura rekubatanidza vezera ravo, shamwari, uye mhuri kune UnCommission.
Vanenge 600 vanyori venhau kubva 38 inoti vakashinga vakagovana zvipupuriro zvavo nezve chiitiko chavo cheSTEM. Ona kuti sei vatauri vengano vakataura nyaya dzavo.
pamusoro 100 vateereri uye shasha, kusanganisira munhu wese kubva kuNASA vazivi venyeredzi nevatambi veNFL kusvika kuVanyori veDzidzo, vakateerera zvakananga kuvatauri vedu vengano uye vakaremekedza zvavanoda kuti shanduko.
Vashoma vevatauri venyaya vakagovana chiitiko chavo cheSTEM
KUDISA NYAYA DZIMWE ZVINOGONA
Takaverenga nekuteerera nyaya dzese dzakatumirwa kune UnCommission, tichiziva kuti chiitiko chega chega chine chokwadi chakakosha nezvekudzidza kweSTEM.
Piri ethnographers akaita ongororo yemhando yepamusoro pamuenzaniso wemumiririri wengano uye akacherechedza mapatani enyaya dzose uye akasimudza iwo nzwisiso.
Wedu mugari munhu ane useza captured musimboti wezvatakanzwa kubva kuvatauri vedu vengano kugovaniswa zvakafara, kuyambuka mitsetse yemusiyano sezvinogoneka nehunyanzvi.
Tiine njere mumaoko, boka re vanachipangamazano, ane hunyanzvi anogara pamharadzano yerudzi uye STEM dzidzo, akatitungamira kune anonyanya kukonzeresa marongero ekuchinja.
KUVA MU STEM
Zvakabuda munyaya idzi kwaiva kudanwa kwakajeka-ku-chiito: vechidiki vanoda vadzidzisi vanogadzira STEM makirasi evadzidzi vese, kunyanya Vatema, Latinx, uye Native American vadzidzi uye vamwewo kazhinji kusabatanidzwa STEM. Nekuda kweizvozvo, 100Kin10 yakakurudzira, mumakore gumi anotevera, kugadzirira uye kuchengetedza nhamba inoshamisira yevadzidzisi veSTEM vakanaka vanopihwa uye vanotsigirwa kukurudzira pfungwa yekuve vekwavo, kunyanya veNative American, Latinx, uye Black vadzidzi.
Hezvino zvimwe zvezvakagovanwa nevatauri venyaya nezvekudiwa kwekuvepo:
Ndakanzwa ndisinganzwiki uye ndisingaoneki semudzidzi weLatina, uye vazhinji vevadzidzisi vangu havana kumbova nehanya nekugadzirisa zvandinoda zvakasiyana sechizvarwa chekutanga cheAmerica uye mudzidzi. - Gabrielle, 22
Nanhasi ndinoreverera STEAM nekuti kana ukatarisa zvakaoma uye uchifunga kugadzira zvakakwana, unogona kuishandisa kune angangoita ese ehupenyu. UYE zvinoita kuti vadzidzi vanzwe sekunge vanokodzera kana vawana tsamba yavanoda kuti vadzidze zvakanyanya, seni. -Munhu asingazivikanwe, 21
Ndakanga ndiri pamberi pechidzidzo chesvomhu, uye ndinoyeuka ndichibvunzwa zvakasiyana-siyana kana ndaive mukamuri chairo kutanga kwese semesita, kungave nevadzidzi, kana nemudzidzisi, kana zvese.
Mukupindura kune zvakagovanwa nevatambi venyaya, mumavhiki ekupedzisira a2021:
Takagovana chimiro chedu pamusoro ari mu STEM nevatinoshanda navo venetiweki, vatori vechikamu veUnCommission, uye vatauri vengano pachavo pamusangano wedu wechigumi Wepagore Wekudyidzana.
~ 160 vanobatana vakapa tsinhiro yavo yokutendeseka pamusoro pezvinovafadza, chatinofanira kungwarira, uye mawaniro atingaita chiono ichi.
100Kin10 ichange ichinyora uye kuongorora mhinduro iyi kusvika pakupera kwegore, ichidzokorora pahurongwa hwedu uye chiono cheramangwana. Pamusoro pezvo, tichaongorora nyaya dzese dzakatumirwa gore rino risati rapera uye tobatanidza miono mitsva inobuda mukupindura kwedu.
CHII CHICHAUYA MUNA 2022
Tichapedza mwedzi mishoma yekutanga ya2022 tichigadzira izvo chaizvo zve100Kin10 inotevera mwedzi, pamwe nekugadzira mamwe maitiro-akagadzirira kufunga nezvemunda wakabuda kubva muunCommission nyaya.
Sezvo isu tichiramba tichishandura nyaya dzeUnCommission kuita chinangwa chakagovaniswa, tichagovana zvigadziriso nevatori vechikamu veUnCommission kakawanda sezvatinogona, kusanganisira izvo mikana yekubatana ichataridzika sekufambira mberi. Pamusoro pezvo, isu tinoronga kuenderera mberi nekugovera nyaya, hunyanzvi, uye ruzivo, tichichengeta vatauri vedu vengano vari pamberi pane zvese zvatinoita.
Tinotenda zvikuru kune wese akabatsira mukusaitwa kweKomisheni gore rino. Tose, tiri kuzvigadzirisa--uye nevatauri vedu vengano.
Ndinoda kukutendai nekundibvumira kuti ndikuudzei nyaya yangu. Kubvumira inzwi rangu kuti rinzwike uye ruzivo rwangu kuti rwutariswe kana zvasvika pakuongorora STEM mukati meUS, ndinotenda zvikuru kuti wakateerera. - Anonymous wenyaya
Ndinokutendai zvikuru nemukana wekugovera ruzivo rwangu, chiitiko chandinoziva vazhinji vevamwe vanhu vanacho, uyezve kugovera nyaya yangu yekuve mu STEM pasinei nekunetseka kwangu. - Anonymous wenyaya
Ndiri kufara kuona kuti STEM nyika inoshanduka sei mune ramangwana, uye kushanda seizvi kuchatisvitsa ikoko. - Anonymous wenyaya